Filtrer les éléments par date : samedi, 18 janvier 2020
samedi, 18 janvier 2020 19:30
Naina Andriantsitohaina: « Tsy ho mora ny asa, ary efa sasa-miandry ny mponina hahita vokatra »
Amperin’asa ny Ben’ny tanàna vaovao an’Antananarivo Renivohitra, Naina Andriantsitohaina. Miaiky ny tenany fa tsy ho mora ny asa, ary efa sasa-miandry ny mponina hahita vokatra. Nanome toky ny mpiara-miasa aminy ao amin'ny Kaominina ny tenany dia « ny asa sy ny hatsembohana ».
Nohamafisiny ny « fanarahan-dalàna ». Tsy misy afa-tsy ny famerenana ny fanarahan-dalàna ihany, hoy izy, no ahafahana mampandroso ny tanànantsika ka « mila miasa mafy, hentitra ary mahitsy tanteraka. Fa mila tsy mitanila, ary indrindra, mila mitsinjo ireo tena sahirana sy marefo ».
samedi, 18 janvier 2020 18:15
Fifaninanana hidirana ho mpianatra Polisy: Miisa 14 700 ny mpiadina manerana ny Nosy
Nanomboka ny androany sabotsy 18 janoary 2020 ka hifarana ny alahady 19 janoary 2020 ny fanadinana fandraisana ho mpianatra Polisy manerana ny Nosy. Mpiadina miisa 14 700 no mifaninana ka ny 20 amin’izy ireo dia ho raisina ho mpianatra « Commissaires de Police », ny 30 « Officiers de Police », 100 « Inspecteurs de Police » ary 1000 « Agents de police ».
Mitsinjara ao anatin’ny foibem-panadinana miisa 14 izy ireo. Raha ny eto Antananarivo manokana dia nizotra am-pilaminana ny fanadinana.
samedi, 18 janvier 2020 18:11
Fanadiovana: Nitohy teny Anosibe ny fanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana, niteraka sakoroka anefa izany ny hariva
Vao maraina omaly zoma 17 janoary dia efa nidina teny Anosibe, Boriborintany fahaefatra Antananarivo Renivohitra, ny mpitandro ny filaminana, nanala ireo mpivarotra amoron-dalana, ireo sarety mipetraka amin'ny sisin-dalana, ary fanakisahana ireo fiara mihantsona amin'ny sisin-dalana.
Nitohy ihany koa ny fanabeazana ny mpandeha an-tongotra handeha amin'ny sisindalana sy hiampita amin'ny faritra voatokana ho azy izy ireo.
Ny harivan'io ihany anefa dia nisy an-dihan'olona tsy fantatra nanakan-dalana, ka voatery natsahatra vonjimaika ny fifamoivoizana teny an-toerana, ary nandray ny andraikiny avy hatrany ireo mpitandro ny filaminana.
Mitohy hatrany ny fanadiovana ny tanàna hoy ireo tompon'andraikitra, ary entanina ny rehetra hanaja ny fahadiovana, hanaja ny fiampitana arabe amin'ny toerana voatondro amin'izany.
samedi, 18 janvier 2020 17:38
Oniversiten’Antananarivo: No comment
samedi, 18 janvier 2020 17:18
Rivo Rakotovao: “Aleo ny marina no lazaina !”
Nisy andiana senatera notarihin’ny filoha lefitry ny Antenimierandoholona faritany Antananarivo, Andriambololona Mananjara nitafa tamin’ny mpanao gazety omaly, manankiana sy manameloka ny filohan’ity andrimpanjakana ity ho mampifangaro ny fitantanana ny antoko sy ny Antenimierandoholona, ary koa nilaza fa tsy nifampierana ny fametrahana fitoriana eny amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana ny tsy nampandalovana teny amin’ny Parlemanta mba ho ankatoavina ireo didy hitsivolana rehetra noraisin’ny filohan’ny Repoblika nandritra ny fotoana tsy nampisy Antenimieram-pirenena teo anelanelan’ny volana febroary 2019 sy jolay 2019.
samedi, 18 janvier 2020 17:09
Faritra Atsinanana: Zanakazo miisa 1 271 933 fototra no hovolena
Homarihina rahampitso alahady 19 janoary ny fanombohan’ny taom-pambolenkazo taona 2020. Ho an'ny Faritra Atsinanana dia amina velaran-tany mirefy 778,7 hektara no hanaovana izany, manomboka any Marolambo hatrany Mahavelona Foulpointe, ary zanakazo 1 271 933 fototra no hovolena amin'izany.
Mirefy 40ha kosa ho an'i Toamasina-I, ka hatao any Antetezana, 37km miala an'i Toamasina tampon-tanana, ka zanakazo 600 000 fototra no hovolena amin'izany.
Misy ny tolo-tanana hanofàna fiara hitatitra ireo olona te andeha hamboly hazo any Antetezana tanterahina manoloana ny « Esplanade » lapan’ny tanànan’i Toamasina androany sabotsy tontolo andro.
samedi, 18 janvier 2020 17:00
Fifaninanana hidirana ho Polisy: Miisa 410 ireo mpiadina aty Menabe
Tanterahina anio sy rahampitso ao amin’ny lycée Pôle Morondava ny fifaninanana hidirana ho Polisy, ho an’i Faritra Menabe. Miisa 410 ireo mpiadina, ka ny 340 ho « Agent de Police » ary ny 70 ho « Inspecteur ».
Manara-maso ny fizotry ny fifaninanana ny Contrôleur général de Police Razatovo Hajanomena.
samedi, 18 janvier 2020 16:55
Sambava: Tontosa ny fametrahana samboady ny Ben'ny tanàna vaovao
Natao omaly maraina ny lanonana fametrahana amin’ny toerany ny Ben'ny tanàna vaovao ny Kaominina ambonivohitra Sambava, Ramangalaza Judicael.
''Ilay tetikasa folo izay nambaranay tamin'ny fampielezan-kevitra no ho entinay hampandroso an’i Sambava. Hanomboka amin'ny ady amin'ny kolikoly izany, ka hanadio ny ato anatiny hampangaraharaha ny fitantanana rehetra ato amin'ny Kaominina'', hoy ny Ben'ny tanàna Ramangalaza Judicael. Mangataka tolotanana amin’ny rehetra ny tenany hiara-hisalahy samy manao izay tandrify ny azy hampandrosoana ny tanàna.
samedi, 18 janvier 2020 13:58
Tapaka nanomboka ny zoma 16 janoary teo ny lalana eo anelanelan'ny Tsararano - Anjalazala mampitohy an'i Antsohihy Befandriana-Nord Mandritsara.
Misy ihany ny famoronana lalana mivily, déviation, fa somary sarotsarotra.
Céline Dion: Nodimandry teo amin’ny faha-92 taonany ny reniny
Nindaosin’ny fahafatesana ny zoma 17 janoary 2020, i Thérèse Tanguay Dion, reny niteraka an’ilay mpihira malaza Céline Dion.
Mpandraharaha i Thérèse Tanguay Dion, ary mpanentana fandaharana tamina fahitalavitra tany Canada izy tamin’ny fahatanorany. 92 taona izy izao nodimandry izao.
14 mianadahy ry Céline Dion, ary izy no zandriolona sady faravavy amin’izy mpiray tampo. Tany ampitetezana faritra any Etazonia, manao fampisehoana i Céline Dion, no izao nodimandry izao ny reniny.